Magaalaa Dirree Dhawaa: 'Warra ergama siyaasa dhuunfaa qabutu magaalittii goolaa jira' - BBC News Afaan Oromoo
Magaalaa Dirree Dhawaa: 'Warra ergama siyaasa dhuunfaa qabutu magaalittii goolaa jira'
Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaala Dirree Dhawaa Obbo Kadiir Juhaar rakkoo nageenyaa magaalittii ilaalchisee BBC'tti yoo dubbatan rakkkoo kana duuba ''garee ergama siyaasaa qabutu jiraa'' jedhan.
Magalaa Dirree Dhawaa keessatti Wiixataa fi Kibxata kaleessaa qaamolee hawaasa magaalittii lamaan hiriirri mormii naannoo bulchiinsa magaalaatti gaggeefamee akka ture jiraattootni BBC'tti himaniiru.
Akka jiraataan magaaliittii dubbifne jedhutti ''Wiixata saba Amaaraa kan ta'aniifi kan saba Oromoo ta'an yaada faallaan hiriiraaf walitti qabamanii, Kantiibaan magaalaa nuun (Oromoo) yeroo biraa haasoofna galaa nuun jedhanii rakkoon akka hin dhalanne jennee gallee'' jedha.
Dirree Dhawaan labsii yeroo muddamaa 'hin labsine'
Sagaleen mormii isaanirratti dhageessisaa turan 'kabaja saba Oromoo' kan tuqullee akka ture nutti hime.
Kaleessa ammo dabaree isaaniin mormii isaanii ibsachuu hime.
Alaabaa mootummaa federaalaa qabachuun haadholiin hojii keenya hojjechuu hin dandeenye, ijoollee keenya guddisuuf rakkachaa jirra, olaantummaan seeraa akka kabajamu gaafatanii nuun jedhe.
Bakka bu'oota 31 filannee Kantiibota waliin akka mariyatan ta'eeras jedha.
Ji'oota darban magaalaan Dirree Dhawaa takkaa amantaa sababeeffachuun yeroo kaan ammoo sabummaa bu'uureffachuun walitti bu'iinsa dhalatuun tasgabbii dhabaa turte.
Sababa kanaan lubbuun namaa darbeera, miidhan qaamaa fi qabeenyaas gaheera.
Kana furuuf bulchiinsi magaalaa maal hojjechaa akka jiru Kantiibaa Itti Aanaa magaalichaa Obbo Kadiir Johaar dubbifnee turre.
Obbo Kadiir ''warra ergama siyaasaa dhuunfaa qabutu magaalittii goolaa jiraa'' jedhu.
''Kan jibbinsaan guutaman, olaantummaan seeraa akka hin kabajamne fedhan, harka nama micciiranii ykn Oromoon bulchuu hin dandeenye jechuuf adeemaa jiru.''
Gareen fedha siyaasaa addaa qaba ittiin jedhan kun garee maqaa 'Saatanaaw' jedhu ofii kennuun ijaarame akka ta'ees dubbatu.
''Ammas gareen biraa hin jirtu. Gareen kun beekamtiis hin qabdu. Nuti ammo abbaa fedhe ta'e, namni beekamtii hin qabne, hayyama mootummaa hin qabne garee jeequmsaati jennee beekna'' jedhan.
Bu'uuruma Kanaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha hojiin qorannoofi seeratti dhiyeessuu hojjetamaa jira jedhan.
Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti garuu haawasni qooda irraa eegamu bahuurratti rincicaa jiraachuu komataniiru Kantiibaa Itti Aanaa magaalittii.
'Uummatotni cunqurfamaa malee cunqursaa hin jiraanne'
Qaala'iinsi gatii jireenyaa Itoophiyaa eessatti dhaabbata laata?
Mariiwwan hawaasaa gaggeessaa turuu kan nutti himan Obbo Kadiir, ''rakkoon saba gidduu hin jiru, ammoo amantaa gidduus waan takka hin jiru'' jedhan.
Poolisiin addaa magaalittii saba tokkorraa ijaarame, dantaa addaa qaba jechuun jiraattootni komataniif obbo Kadiir dhimmichi qoratamaa akka jiru himaniiru.
''Hojii isaa kan qulqullinaan dalaguufi hin dalagne jira. Mana marii nageenyaa qabnuun hojii sana keessa ilaalaa deemuutti jirra.''
Komii uummataaf gurra kennanii ''waan sirraa'uu qabu waan jiru sirreessaa deemnaa jedhan.
Adeemsa kana keessatti garuu poolisiifi mana murtii dabalatee bulchiinsi magaalittii hooggansa mootummaa federaalaa jala kan jiru waan ta'eef irratti haasa'amee furmaata fiduuf yeroo fudhachaa akka jirulle dubbataniiru.
Dhimma galii magaalaa wajjin walqabatees gahee isaaf malu argachaa akka hin jirre dubbatan.
Mootummaa federaalaa waliin wal hubannoon hojjetamaa akka jiru himanii, hanqinoota jiran qaama isaan hoogganutti dhiyeessuu dabalanii nutti himaniiru.
Viidiyoo Holqa Laga Odaa Dirree Dhawaa
3 Fuulbana 2019
Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa akka labsii yeroo muddamaa labsetti inni himame dogongora jedhe
Diinagdee Itoophiyaa: Qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa eessatti dhaabbata laata?